Ụbọchị My Pet » Ònye Kwesịrị Ịkwụ Ụgwọ na mbụ Ụbọchị – Ndụmọdụ N'ihi na ndị mmadụ
emelitere ikpeazụ: Jul. 06 2020 | 3 min agụ
Ndị mmadụ nwere nile di iche iche nke ikowe-acha ọkụ mgbe ọ na-abịa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ma eleghị anya, otu n'ime ihe ndị kasị nkịtị inwe mmetụta mesiri ma ọ bụ na-adịghị mma banyere ịtụ maka ụbọchị. Men ikwu dị iche iche a nchegbu. Ụfọdụ ndị ikom mgbe niile ụgwọ, ma na nzuzo na-eche na-ezighị ezi n'ime ebe ede ego. Ụfọdụ ndị ikom na-esi ọnwụ na-aṅa ọkara ọ bụla na ụfọdụ ndị na-larịị iwe banyere ya. Ụfọdụ ndị ikom bụ ndị dị nnọọ ezi na-atụ egwu nke yiri ochie gaferela ma ọ bụrụ na ha na-enye na-akwụ ụgwọ.
M maara nke ndị ga-dị nnọọ ewepụghị si na-ajụ-akwụ na zuru na mbụ ụbọchị, kama na-esi ọnwụ na ụgwọ a ga-kewaa kpọmkwem na ọkara. Gịnị mere? N'ihi na ha nwere ọtụtụ ahụmahụ nke na-akwụ ụgwọ maka ihe dị oké ọnụ ụbọchị na nwaanyị naanị ka mgbe anụ olu ya ọzọ. Ma eleghị anya, gị na ya nwere a ime gi. Ikekwe, ọ bụ nwaanyị ị mmasị ma chere na ị na-vibing na, ya mere na ị chụọrọ akwụ, naanị nwere ya apụ n'anya na ma gaghachi oku gị. Ma ọ bụ ikekwe ị kwụrụ ruo ọtụtụ mediocre ma ọ bụ darned nri egwu ụbọchị na ị ịjụ ya. All na egbughị tara ahụhụ ego. Na m ga-esi na m n'ezie ime. Bụ ndị ga-adịghị ihe ọ akpịrị!
Na ndị a ugboro nke ohiha mere kwesịrị a nwoke-atụ anya ka ụkwụ dum na-eri nke ụgwọ dị nnọọ nanị n'ihi na ọ bụ nwoke? Women chọrọ ohiha, ọma ebe ọ bụ.
Ka m kọọrọ gị a obere ihe nzuzo. Ọ bụrụ na nke a bụ na ị, na ị na-esi ọnwụ na ya na-akwụ ụgwọ ọkara ke akpa ụbọchị, nke a ga-mmenyenjo ọ bụla ezi mma nwanyị nwanyị. Ị na-ahụ m na-ezi m inyom ahịa na-ha nwanyị ike gburugburu ndị ikom ha na ha kpara, ọ na-arụ ọrụ mma na ụzọ. Nke a pụtara na-anata ùgwù na ikwe ka nwoke romance ya. Ị nwere ike ghara ma na-gị oke ike, ma romance ike ọma. Ọ ga-abụ ihe dị ka ịlụ gị mma ma ọ bụ nwunye, onye o doro anya na ga-akwụ ụgwọ ọkara ụgwọ. Ya mere, mgbe m na-aghọta gị obi nkoropụ, M ukwuu nwere ike ikwu iso na-eme gentlemanly ihe ma na-achụ iji kwụọ ụgwọ. A àgwà nwaanyị ga-aghọta nnọọ na ị maka ya.
Ma ọ bụghị naanị ime ya na ndị inyom na-amasị gị. Dọhọ-akwụ na KWA ụbọchị. E wezụga eziokwu na nke a bụ nnọọ incredibly ọma na ụdị na ezi àgwà, eluigwe na ala na-ekiri ma na ị na-eme ezi omume. Ọ ga-hụrụ.
M bụ otu na a ụbọchị na-aga n'ezie ọma. Otú ọ dị na njedebe Ihọd n'ezie kpọpụta a mgbako kewaa elu ụgwọ kpọmkwem dị ka onye nwere ihe na-eri ma na-aṅụ (ọma m na-eche na ọ bụ mgbako na ya na ekwentị ma ka na-). Ozugbo nke a mere m niile mma m mbụ e mmetụta igbapu nri nke m. CHAỊ! Agaghị m were ịbụ na onye dị ka nke a – Ọ bụrụ na ọ bụ dị ka nke a ugbu a were ihe ọ ga-adị ka ya ibi na! Ị pụrụ ichetụ n'echiche ịzụ ahịa Ikea maka ngwá ụlọ? Gịnị banyere on m ụbọchị ọmụmụ, m ga-akwụ ụgwọ ọkara mgbe ahụ kwa? Ọ bụghị nnọọ ihunanya.
Zere ịghọ jaded banyere ịtụ site nnọọ ịbụ-eji obi ụtọ banyere ya. Na siri ike ma daharia nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ụfọdụ n'ime ndị inyom na ị na-si ga-apụ n'anya na laghachi oku gị. Ọ bụ pa N'ezie. M nzọ i mere otu ihe ahụ onye ebe tinyere akara ma ọ bụrụ na ị na-brutally n'eziokwu na onwe gị. Otú ọ dị, mgbe gị na nwaanyị otú abịa tinyere, na ị na-eme ya pụrụ iche na ike romance n'ihi na ị chụrụ-akwụ, ọ bụghị nanị na nke a ga-ramp elu mma, ma ọ ga-amata gị maka ike, oke nwoke na ị bụ.
N'ihi ya, m na-ekwu echegbula banyere ịbụ ochie eset - ka ewere nguzo ha maka chivalry, romance na ahuhu. Gịnị mere ọ bụghị naanị-na na na-enwe obi ụtọ i nwere ike ime ka a nwaanyị site n'ime nke a ụdị ihe ya, ma i bu n'obi na-ahụ ya ọzọ ma ọ bụ. Ị nwere ike mgbe ahụ bask na ihe ọmụma na ị bụ a kwesịrị ekwesị, n'ụzọ zuru ezu ịrụ ọrụ na onwe ha nwoke, onye nwere ike họrọ na-emeso nwaanyị, nanị n'ihi na ọ nwere ike. Obi mpako.
Jọrọ njọ Eziokwu Banyere Modern dịwara
Top 10 Mejọọ Men Mee Mgbe ịkpọtụrụ Women Online